Maxamed Dheere oo ku saxsanaa inuu iska saaro maleeshiyada uu watey Col. C\_llahi Yusuf
Mudane Maxamed Dheere ayaa qaatay go’aankii ugu siyaasada cuslaa tan iyo markii uu la xulufoobay Col. C\_llahi. Dhibaatada soo gaartey Jowhar waxey si dhibaato leh u saameysay dhinaca dhaqaalaha, bulshada, iyo siyaasada.
Wixii dhaqaale ah oo gobolka la siin lahaa waxaa ka soo hormaray wixii la siin lahaa dowlada degen Jowhar ee garabka Col. C\_llahi. Wafdiyada imaanaya Jowhar waxaa isugu tala galay iney la kulman madaxda dowlada Col. C\_llahi, wixii dhaqaale ay ka helaana waxaa loo leexiya xisaabaad ka furan dibeda.
Bulshada Jowhar ayaa waxey kala kulantay dhibaato joogitaanka Col. C\_llahi Yusuf iyo maleeshiyadiisa. Dadka reer Jowhar ayaa go'doon waxey ka galeen walaalahooda degen Xamar, waxaana lagu furay daacayad looga hor keenayo walaalahooda degen Muqdisho.
Sidoo kale waxa dhinaca siyaasada laga abuuray abaabul colaadeed oo lagu doonayo Jowhar iney ku duusho Muqdisho iyo in Jowhar laga socodsiiyo siyaasada Itoobiya ay kuwadato dowlada Col. C\_llahi taas oo looga soo horjeedo Muqdisho.
Dadka degan Muqdisho oo aan aqoonsaneyn dowlada Col.C\_llahi Yusuf oo ay soo dhiseen Itoobiya iyo Kenya oo ah laba dal oo ay Soomaaliya kala dhexeyso cadowtinimo diineed iyo mid dhul ayaa u arka siyaasada Maxamed dheere uu Jowhar uga saaray Col. C\_llahi Yusuf iyo maleeshiyadiisa mid ah tilaabo uu u qaaday dhinaca wanaagsan, waayo Col. C\_llahi ma leh maskax siyaasadeed ee uu dalka Soomaliya hogaankeeda ku qabto wakhtigan oo ay u baahan tahay nabadgelyo iyo kalsooni laga dhex abuuro dadweynaha Soomaaliyeed oo aadka ugu baahan dowlad u sameysa dib u heshiisiin.